हामीलाई अहिलेसम्म सबैभन्दा बढि पिरोलेको कुरा भनेको 'बन्द' नै होला । बन्द, हडताल या भनौँ आन्दोलनको प्रकोप हामीले धेरै झेलेका छौँ । अब संविधान बन्छ है, बन्छ है भनेका बेला, धमिलो पानीमा माछा मार्ने धेरै निस्किए । कोही अखण्ड र कोही बिखण्डको माग लिएर सडकमा ओर्लिए । जातीयताको नाममा ओर्लनेहरुले त केही सिमित नेताहरुको निर्देशनमा कसैलाई बजाउन बाँकी राखेनन् बन्दको निहुँमा ।
बन्द हाम्रो दिर्घरोग त बनिसकेकै छ, तर अब यो कुरा अफलाइन र सडकमा मात्र सिमित छैन । हिजोआज त बन्दको कुरा गर्यो भने नि रमाइला नतिजाहरु देखिन्छन् गुगलमा । एक पार्टिका अध्यक्षलाई ई-वे मै बिक्री गर्न राखिएको सन्दर्भमका आज गर्न लागेको बन्दको कुरा अलि असरदार नहुनसक्छ । जब जब बन्दको हल्ला चल्न थाल्छ तब सबैलाई कौतुहलता जाग्न थाल्छ, आज बन्द हो वा होइन भनेर । साँच्चै भन्ने हो भने, फेसबुक र ट्विटरमा त उक्त बिहान आज बन्द हो कि हैन भन्दैमा बित्छ । यही कुरा गुगलमा खोजेर हेर्नु भा'को छ? यदि आज बन्द हो भन्ने खोजेर हेर्नुभयो भने तपाईलाई गुगलले थर्काउने छ ।
गुगलमा "आज नेपाल बन्द हो?" भनेर सर्च गर्नुभयो भने, उत्तर आउँछ "नेपाल तेरो पाइन्टको जिपर हो र?" जेठ १४ भन्दा अघि दिनहुँ बन्द हुँदा, अनि सुदुरपश्चिम लगायत देशका अधिकांश भागहरुमा महिनौँ दिन बन्द हुँदा बन्द देखि रिस नउठ्ने को पो थियो होला र? कुरो जे सुकै होस्, बन्द हो भनेर गुगललाई सोधियो भने सिधा जवाफ दिँदैन है यसले ।
जेठ १४ मै संविधान जारी हुन्छ भन्दै, देशभरी विभिन्न जातजाती र संगठनको नाममा देशलाई बन्द गरियो । केहीलाई लुटियो, केहीलाई कुटियो, दिनुसम्म दुख दिइयो । तर पनि जेठ १४ मा संविधान जारी हुन सकेन । जेठ १४ अघि अब देशमा के होला भन्ने लाग्थ्यो भने, अब अहिले १४ आएर गइपनि सकेको छ । संविधान नबन्ने बाहेक अरु केही काम भएन । देशमा शान्ति छाएको छ भन्दा फरक पर्दैन । अब के हुन्छ भनेर नेतालाई सोध्नु भयो भने, संविधानसभाको फेरि चुनाव हुन्छ भन्लान कसैले । कसैले भन्लान् असंवैधानिक सरकारले असंवैधानिक चुनाव गराउन खोज्दैछ । कसैले भन्लान् अब आन्दोलनको आँधिबेहरी ल्याइन्छ, बन्द गरिन्छ । बन्दको कुरा गर्नेलाई चैँ भन्दिहालौँ, "नेपाल तेरो पाइन्टको जिपर हो र?", कहिले बन्द गर्ने केहिले खोल्नलाई ।
साँच्चै अब के होला भन्ने चिन्ता व्याप्त छ । आत्तिनुपर्दैन गुगलले सहज रुपमा यो समस्याको समाधान पनि गरिदिएको छ ।
हामी र हाम्रा नेताहरुले अर्कोलाई आक्षेप लाउनु परे भन्ने गरेका छौँ "हाम्रो सबैकुरा बाहिरि देशबाट निर्देशित छ" । अझ भनौँ गुगलले नि यही कुरालाई पुष्टि गर्छ । गुगलमा "अब के हुन्छ" भनेर सर्च गर्दा, "जयन्तलाई सोध्नुस" भन्ने जवाफ आउँछ । जयन्त को भनेर भनिरहनुपर्ने जरुरत त छैन होला । हामीले अफलाइन हैन, अनलाइन मै पनि कसैलाई अब के हुन्छ भनेर नसोध्दा उचित होला, किनकी जवाफ त यही नै हो ।
एक पार्टिका अध्यक्षलाई ई-वे नामक साइटमा कसैले बेच्न राखिदिएको रहेछ, जुँगा सहित पाइन्छ भनेर । त्यो कुरा चाँहि ब्लगमा नराखौँ जस्तो लाग्यो । कुरो रमाइलो छ, हेर्न मन लागेको खण्डमा 'ई-वे'मा गएर, आफैँले अन्दाज गरेर सर्च गर्नुस्, तपाई एकपटक मज्जाले हाँस्नुहुनेछ ।
पुनश्च: गुगल सर्च रिजल्टमा यसप्रकारको नतिजा देखिनुमा गुगलको कुनै किसिमको हात हुँदैन । वेवसाइट र ब्लगहरुमा लेखिएको लेखको 'शीर्षक' तथा 'शब्दहरु' मिल्न गएको खन्डमा मात्र सर्च रिजल्टमा यसप्रकारका नतिजा देख्न सकिन्छ । तपाईलाई पनि यस्तै अन्य केही रमाइला सर्चहरु थाहाछन् भने तलको कमेन्ट बक्समा प्रतिक्रिया जनाइदिनुहोला ।
Nikhil Pandey August 1, 2012 at 11:37 AM
yo kura tapaile balla thaha paunu bhayeko raicha....maile ta 18 may ma thaha payeko the fb ko wall ma post gareko thiye